musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Zimbabwe Breaking News » Kuzorora uye Kubayiwa muGuam kwevashanyi veTaiwanese
Kune akawanda akamirira mazita muTaiwan kuti vanhu vawane mushonga we COVID-19. Kuenda kuzororo kunzvimbo yeU.S.Guam kunosanganisira mushonga, mahombekombe akanaka anopisa, uye kuravira kwakasarudzika kwemweya weHafa Adai.
aizivikanwa "Mhepo V & V" ye "zororo uye kubayiwa majekiseni," inosanganisira muyero wekutanga wemushonga wekusarudza, pamwe nekwanisi kepfuti repiri kana vachengeti vezororo vakagara mudunhu reUnited States kwenguva yakakwana.
Kufarira nzendo dzakakwira mushure mekunge hurumende yeGuam yabvisa chinodiwa chekuisa voga kuvashanyi vanogona kuratidza yakaipa PCR bvunzo kubva mukati maawa makumi maviri nemaviri ndege isati yasimuka.
Iyo EVA Air charter, yeAirbus A321-200, ndeimwe yendege dzinoverengeka dzakarongedzwa neakasiyana mafambiro ekuTaiwan, senge Shumba Kufamba uye Phoenix Kuratidzwa. Vanopfuura zviuru zviviri zvevashanyi vanobva kuTaiwan vanotarisirwa mumwedzi waChikunguru naNyamavhuvhu.
Guam Visitors Bureau (GVB) uye AB Won Pat International Airport Authority vakatambira ndege yekutanga yeGuam yakananga kubva kuTaiwan mune rinopfuura gore nehafu. Iyo EVA Air charter ndege yakatakura vafambi 153 kuenda kuchitsuwa kunotora chikamu kuGuam chirongwa chekudzivirira zvekushanya - Air V&V.
Vanopfuura zviuru zviviri zvevashanyi vanozopedzisira vafamba kubva kuTaiwan kuenda kuGuam kunovharirwa uye kunakidzwa nezororo reroto panguva imwe chete.
Vatashanyi veTaiwan vadzokera kuGuam
"Uku kungori kutanga kwekumutsidzirwa kweindasitiri yekutanga yeGuam," akadaro GVB Mutungamiri & CEO Carl TC Gutierrez. "Ndinoda kutenda Gavhuna Lou Leon Guerrero nekutsigira chirongwa cheAir V&V, icho chinopa vashanyi mukana wekubaiwa jekiseni uyezve vanowana mweya wedu weHåfa Adai."
GVB yakapa inoyevedza mvura yemumabhodhoro uye nemaoko sanitizer kune vafambi apo ivo vakaita nzira yavo kubva kune vanobva kune imwe nyika kuenda kuDhipatimendi rePublic Health uye Social Services (DPHSS) yekutarisa. Vapfuuri vakakwaziswawo nemimhanzi inorarama yeChamoru naRuby Santos naJesse Bais.
"Ndinoda kucherechedza kubatana kukuru pakati peGuam Taiwan Office, EVA Air, nevamwe vatengesi vezvekufambisa mukuita kuti ndege yechata iyi ibudirire," akadaro GVB Director weGlobal Marketing Nadine Leon Guerrero. "Tinoda kutenda Guam International Airport Authority, Guam Customs uye Quarantine, Airport Police, uye Public Health nekuenderera mberi kwekubatana kwavo mukugamuchira vashanyi kuchitsuwa chedu chakanaka."